Practical Translation Course – Peak Point
Practical Translation Class
ဘာသာပြန်လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်နေသူများအတွက် အရည်အသွေး မြှင့်တင်နိုင်မယ့် သင်တန်းကောင်းလေးတစ်ခုကို မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ။
ဘယ်သူ သင်ပေးမှာလဲ ?
ဘာသာပြန်အတွေ့အကြုံ နှစ်ပေါင်း ၄၀ ကျော် ရှိပြီး ဘာသာပြန်စာအုပ်ပေါင်း ၁၆၀ ကျော် ထုတ်ဝေထားသူ၊အမျိုးသားစာပေ ဘာသာပြန်ဆု၊ သုတစွယ်စုံ ဘာသာပြန်စာပေဆု အပါအဝင် ဘာသာပြန်စာပေဆု (၇) ကြိမ်ရရှိထားသူ၊Sky Net Media ၏ General Managerမြန်မာနိုင်ငံ ဘာသာပြန်စာပေကွန်ရက်၏ ဒုတိယဥက္ကဌ တစ်ဦးလည်းဖြစ်သူ ဆရာကြီးဟိန်းလတ်က သင်ကြားပို့ချပေးသွားမှာပါ။
ဘယ်လို သင်ပေးမှာလဲ ?
သင်တန်းမှာ နှစ်ပေါင်းများစွာ ဆရာကြီး၏ အတွေ့အကြုံများမှ Professional Translator တစ်ဦးဖြစ်စေရန် လိုအပ်သော အရည်အချင်းများ၊ သိသင့်သိထိုက်သော အချက်အလက်များကို ကဏ္ဍဍအစုံမှ သတင်းများ၊ ဆောင်းပါးများဖြင့် သင်ကြားပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Active Learning Classroom ပုံစံဖြင့် သင်ကြားပေးမှာဖြစ်ပြီး သင်တန်းချိန်အတွင်းမှာ ဆရာနှင့် ကျောင်းသား ဆွေးနွေးခြင်းများအပြင် သင်တန်းချိန်အတွင်း မိမိသိလိုသည်များကိုလည်း မေးမြန်းနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဘာတွေ သင်ယူလေ့လာနိုင်မှာလဲ ?
– မှတ်သားရ ခက်ခဲသော အဓိပါယ်ရှုပ်ထွေးသည့် စကားလုံးများ၊
– ဆရာကြီး၏ အတွေ့အကြုံများမှ ရရှိခဲ့သော မှတ်သားဖွယ်ရာများ၊
– နေ့စဉ်ထွက်ပေါ်နေသော ဝေါဟာရ အသစ်အဆန်းများ၊
– ဘာသာပြန်ဆိုရာမှာ မှန်ကန်စွာ စကားလုံးရွေးချယ်နိုင်စွမ်း၊
– အချိန်တိုအတွင်း ဆီလျှော်အောင် ဘာသာပြန်ဆိုနိုင်စွမ်းနဲ့
– အဘိဓာန်မကြည့်ဘဲ ဘာသာပြန်ဆိုနိုင်စေမယ့် နည်းလမ်းတွေကိုပါ လေ့လာနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
သင်တန်းမှာ ဘာသာပြန်နည်းစနစ်တွေနဲ့ ဘာသာပြန်ဆိုရာမှာ ကြုံတွေ့ရတဲ့ အခက်အခဲတွေကို လက်တွေ့လေ့လာ သိရှိနိုင်မှာ ဖြစ်တဲ့အပြင် အပတ်စဉ် တိုးတက်လာမယ့် ဘာသာပြန်အရည်အသွေးတွေကိုပါ မျက်ဝါးထင်ထင် သိရှိနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
သင်တန်းသားဦးရေ ဘယ်လောက်ရှိမှာလဲ ?
ထိထိရောက်ရောက် သင်ကြားနိုင်ဖို့အပြင် ဆရာနဲ့ မိသားစုဆန်ဆန် ရင်းရင်းနှီးနှီး သင်ကြားနိုင်စေဖို့ လူနည်းစုပဲ လက်ခံ သင်ကြားပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဘာသာပြန်အတွေ့အကြုံရှိတဲ့ ဘာသာပြန်ဆရာ၊ ဆရာမတွေသာ တက်ရောက်နိုင်မှာ ဖြစ်တဲ့အပြင် သင်တန်းသားဦးရေ ၁၈ ဦး အထိပဲ ကန့်သတ်ထားပါတယ်။
သင်တန်းသားအရေအတွက် အနည်းငယ်သာ ကန့်သတ်ထားပြီး ဦးရာလူစနစ်နဲ့ လက်ခံမှာ ဖြစ်လို့ အမြန်အပ်နှံထားမှ စိတ်ချရမယ်နော်။
အပတ်စဉ် စနေနေ့၊ ညနေ ၄ နာရီမှ ၆ နာရီ၊ တစ်ပတ်လျှင် တစ်ရက်တည်းသာ ဖွင့်လှစ်သင်ကြားပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အမှတ် ၁၇၀ – ၁၇၆ ၊ MGW Center ၊ အခန်းနံပါတ် – ၄၀၉ ၊ ဗိုလ်အောင်ကျော်လမ်း ၊ မဟာဗန္ဓုလလမ်းနဲ့ ကုန်သည်လမ်းကြား ၊ ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ် ။
ဖုန်းနံပါတ် ဝ၁ ၂၄၉ ၆၀၇ ၊ ဝ၉ ၇၇၈၉ ဝဝဝ၂၄ ကို တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ် မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။
ဖုန်း – 01 – 249 607 , 09- 77 89000 24 သို့တိုက်ရိုက် ဆက်သွယ်မေးမြန်း နိုင်ပါသည်။
Peak Point Academy ၏ အကြံပေးတစ်ဦးဖြစ်ပြီး ဆရာ့၏ ဘာသာပြန်ဗဟုသုတများကို ဝေမျှဟောပြောပေးလျက် ရှိသည်။ ဆရာဦးဟိန်းလတ်သည် ဘာသာပြန်နယ်ပယ်တွင် နှစ်ပေါင်း ၄၀ ကျော် အတွေ့အကြုံရှိပြီး ဘာသာပြန်စာအုပ်ပေါင်း ၁၈၀ ကျော်ကို ထုတ်ဝေဖြန့်ချီထားသူတစ်ဦးဖြစ်သည်။ အမျိုးသားစာပေ ဘာသာပြန်ဆု၊ သုတစွယ်စုံ ဘာသာပြန်စာပေဆု၊ ထွန်းဖောင်ဒေးရှင်း စာပေဆု အပါအဝင် ဘာသာပြန်စာပေဆု ၇ ကြိမ် ရရှိခဲ့သူဖြစ်ကာ မြန်မာဘာသာပြန်စာပေကွန်ရက်၏ ဒုဥက္ကဌလည်း ဖြစ်သည်။ မြန်မာနိုင်ငံစာကြည့်တိုက်များဖောင်ဒေးရှင်း၏ ဒုဥက္ကဌ တစ်ဦး ဖြစ်သည့်အပြင် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး စာကြည့်တိုက်ဖောင်ဒေးရှင်း အတွက် တာဝန်ခံအဖြစ် ဆောင်ရွက်ပေးနေသူလည်း ဖြစ်သည်။ ဆရာကြီးက သြစတြေးလျနိုင်ငံ ကင်ဘာရာ တက္ကသိုလ်၊ အစ္စရေးနိုင်ငံ ဂိုလ်ဒါမေယာတက္ကသိုလ်၊ အိန္ဒိယနိုင်ငံ IMCC တက္ကသိုလ်၊ ထိုင်းနိုင်ငံ Amsar Universityများတွင် စာနယ်ဇင်းပညာကို သင်ယူခဲ့သူတစ်ဦး ဖြစ်ပါတယ်။ သမဝါယမတက္ကသိုလ်တွင် အင်္ဂလိပ်စာ ဌာနမှူးအဖြစ် လည်းကောင်း၊ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်တွင် Creative Writing ဘွဲ့လွန်သင်တန်း များတွင်လည်းကောင်း သင်ကြားပို့ချပေးလျက် ရှိပါတယ်။